साइपाल हिमाल आरोहणमा असफल भए विश्व किर्तिमानी आरोहि डा. जर्ज • Kalanga News
गृह/पर्यटन/साइपाल हिमाल आरोहणमा असफल भए विश्व किर्तिमानी आरोहि डा. जर्ज
साइपाल हिमाल आरोहणमा असफल भए विश्व किर्तिमानी आरोहि डा. जर्ज
मकरराज धामी, कार्तिक २८ बझाङ
बझाङमा रहेको साइपाल हिमाल आरोहणको प्रयास गरिहेका दुई टोली आरोहण गर्न नसकेर फर्किएको छ । ७ हजार ३१ मिटर अग्लो साईपाल हिमाल आरोहण गर्न प्रयास गरिरहेको अमेरिकी, क्यानेडिन र चार जना बझाङी चेली सहितको विश्व विख्यात आरोहीहरुको दुबै टोली मौसम अनुकुल नहुँदा हिमाल आरोहण गर्न नसकेर फर्किएको हो । बझाङी चेलीहरु साइपाल गाउँपालिकाका लक्ष्मी बुढा, संगिता रोकाया, सुर्मा गाउँपालिकाकी पवित्रा बोहरा र तल्कोट गाउँपालिकाकी सरस्वती थापा सहितको विश्व विख्यात आरोहिकोे टोलीले कात्र्तिक १८ गते बाट हिमालको दक्षिणी मोहडाबाट आरोहण सुरु गरेका थिए ।
दुईजना विदेशी र चारजना शेर्पाको टोली साइपाल हिमालको ६ हजार ८ सय मिटरको उचाइ सम्म पुगेपनि अभियान सुरु गरेकी बझाङकी चार छोरीहरु भने ५ हजार ६ सय मिटर उचाई सम्म पुगेर फर्किएका थिए । तर १८ सय मिटरको रोप (डोरी) मार्फत आरोहण गर्न नसकेपछि फर्किएर उनीहरु सोमबार बझाङ सदरमुकाम चैनपुर आइपुगेका छन ।
मिसन साईपाल नाम दिएर बझाङको साइपाल हिमाल आरोहण गर्नेमा आठ हजार मिटर भन्दा बढी उचाईका १४ वटै हिमाल चढेर विश्व रेर्कड कायम गरेका स्पेनिस नागरिक डा. जर्ज इगोचेएगा र आठ हजार मिटर भन्दा माथिकै सबै हिमाल चढिसकेकी संसारकी प्रथम महिला एडुर्ने पासावन समेत रहेका थिए । लगातार हिमपात भईरहने र जोरले हावा चल्ने भएका कारण टोली चुचुरोमा पुग्न नसकेको हिमाल आरोहणमा विश्व किर्तिमान कायम गर्न सफल स्पेनिस नागरिक जर्ज इगोचेएगाको भनाई छ । दक्षिणी मोहडाबाट हाल सम्म कसैले पनि सफल आरोहण गर्न सकेका छैनन । सुदूरपश्चिमको भ्रमणपछि नेपालको यात्रा पूर्ण भएको उनको भनाई छ । सन् १९८९ मा पहिलोपटक नेपाल आएका उनी त्यसयता ३३ पटक भन्दा बढी आइसकेका तर सुदुपश्चिममा भने उनी पहिलोपटक आएका हुन । विश्वलाई एकपटक सुदूरपश्चिम घुम्न आह्वान गर्ने बताउदै उनले भने, ‘यहाँको भौगोलिक सुन्दरता विश्व जगत लाई लठ्याउने छ । यस्तो कुरा ओझेलमा पर्नु भनेको यहाँको समुदाय अझै पछाडि पर्नु हो ।
यस अघि अमेरीकाका स्की खेलाडी विलियम एस लासेल्स, ट्यालेर जोन, वेनार्ड स्ट्राग्वलेवस्की, जोन्सन थम्पसन र क्यानाडाका चाड सार्यस समेत रहेको उक्त टोलीका दुई सदस्य ट्यालेर जोन र वेनार्ड स्ट्राग्लेवस्की अक्टोवर २७ तारिखको दिन विहान ६ हजार ७ सय मिटर सम्म पुगेको थिए । तर अप्रत्यासित रुपमा तापक्रम घटेको र तिव्र गतिमा हावा चलेका कारण आरोही टोली चुचुरोमा पुग्न नसकी फर्किएका थिए । अमेरिकी नागरिक र्फोरेस्ट सि कोट्सको नेतृत्वमा रहेको उक्त टोली करिब २५ दिन देखी हिमालको दक्षिणी मोहडाबाट आरोहण गर्न प्रयास गरिरहेको थियो । आरोहणका लागी अक्टोवर ३ तारिखका दिन साइपाल आधार शिविर पुगेको सो टोलीले तिन पटक साइपाल आरोहणको प्रयास गरे पनि असफल भएको आरोहण दलका सदस्य भोजराज भाटले बताए ।